खेलकुद Archives - Changupatra
तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ : गृहपृष्ठ › Category Archives › खेलकुद
भक्तपुर नगरब्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकूद प्रतियोगितामा कुन स्कुलले मारे बाजी ? कुन विद्यार्थी भए उत्कृष्ट ?
भक्तपुर , ३ चैत्र । भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेकाे विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता मंगलबार सम्पन्न गरेकाे छ । प्रतियोगिता अन्तर्गत विभिन्न १० खेल भएका थिए । खेलमा निम्न विद्यालयहरू प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना भए । १) खो खो प्रतियागिताः…
बुद्धिचाललाई लडाईंको संज्ञा दिँदै अध्यक्ष बिजुक्छेंले भने, ‘खेल–खेलको निम्ति मात्र नभई देशको सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति जरुरी’
भक्तपुर, २९ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले बुद्धिचाल खेल एक प्रकारको लडाईं भएको बताएका छन् । भक्तपुरमा शनिबार बुद्धिचाल प्रतियोगिता र भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै उनले बुद्धिचाल खेल बौद्धिक खेल भएको र यसले…
रु. २६ लाख खर्चेर पार्टी प्यालेसमा प्रतियोगिता गर्दै भक्तपुर नगरपालिका
भक्तपुर, २१ फागुन । भक्तपुर नगरपालिकाले फागुन २९ गतेदेखि चैत्र ३ गतेसम्म अन्तरनगर वुद्धिचाल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै खेलकुद प्रतियोगिता गर्दै आएको भक्तपुर नगरपालिकाले यो वर्ष रु. २६ लाखको बजेटमा उक्त प्रतियोगिता गर्न लागेको…